I-Samsung Galaxy A7 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Isamsung ngoku iphakathi kotshintsho kwisicwangciso, esiya kuthi siguqule imigca yefowuni. Kolu tshintsho, ubungakanani obuphakathi buza kufumana ubukho kwikhathalogu yenkampani, enkosi kuluhlu lweGalaxy A. Ngaphakathi kolu luhlu, Sele sifumene iflegi entsha efanayo, i-Galaxy A7 2018, esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
Le fowuni iba yiyo Isamsung yeyokuqala ukuba nekhamera ngasemva kathathu. Yeyona nto iphambili kule Galaxy A7 2018. Ngaphandle koko, yimodeli yodidi oluphakathi kakhulu. Yintoni esinokuyilindela kuyo?
Ngokuphathelele kuyilo, Ifemu yaseKorea iveza imodeli enezakhelo ezingacacanga, nangona ephezulu nephantsi ibonakalisiwe. Kodwa ayizukubakho inotshi, njengesiqhelo kwiifowuni zenkampani. Sithetha malunga nokucaciswa kwayo apha ngezantsi.
1 Iinkcukacha zeGalaxy A7 2018
Iinkcukacha zeGalaxy A7 2018
I-Galaxy A7 2018 yindawo ekumgangatho ophakathi ngokwamanani ngokweenkcukacha, ngaphandle kwekhamera yangemva kathathu. Oku kucinga ukuba ifowuni ingaphezulu kokuhambisa kwaye ithembisa ukwenza kakuhle. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwefowuni entsha ye-Samsung:
Isikrini: I-6-intshi ye-Super AMOLED enesisombululo se-FHD + (2220 x 1080 px) kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo: Iibhola ezisibhozo kwi-2.2 GHz (kuxhomekeke kwintengiso iya kuba yi-Exynos okanye iprosesa yeQualcomm)
I-RAM: I-4 GB / 6 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-64 / 128GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-128GB kwimodeli ye-64GB)
Ikhamera esemva: I-24 + 8 + 5 MP eneeferches f / 1.7, f / 2.4 kunye f / 2.2 Isibane se-LED
Ikhamera yangaphambili: MP engama-24 ene-f / 2.2 ukuvula
Ibhetri: 3.300 mAh
Ukuxhuma: 4G / LTE, Dual SIM, iBluetooth 5.0, iWiFi 802.11a / b / g / n / ac,
Abanye: Icala leminwe yesandla, iMicroUSB, i-3.5 mm jack, iRadioFM, iNFC (kwezinye iimarike)
Ubungakanani: I-159.8 x 76.8 x 7.5 mm.
Ubunzima: I-168 g.
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.0 i-Oreo enamava eSamsung njengaleyo yokwenza ngokwezifiso
Akuthandabuzeki ziikhamera zangemva ezintathu ezitsala umdla wale fowuni. Inkampani yaseKorea ibazisa okokuqala kwenye yeefowuni zayo, into ekudala ihletywa. Sinee-sensors ezintathu, nganye nganye inomsebenzi.
Isenzi esona sentloko siziifoto eziqhelekileyo, kunye ne-24 MP kunye neferture f / 1.7 kwaye ine-autofocus. Emva koko sinesivamvo senkxaso, esiya kusinceda silinganise umgama phakathi kwezinto, ukuze imo ye-portrait isetyenziswe ngokuchanekileyo. Le nzwa yi-5 MP nge-f / 2.2. Ekugqibeleni, Inzwa yesithathu yi-8 MP ububanzi kunye nokuvula f / 2.4. Enkosi kolu dibaniso, iifoto esiza kuzithatha ngeGalaxy A7 2018 ziya kuhlala zilungile.
Ukongeza, isoftware ikwadlala indima ebalulekileyo kwiikhamera zesixhobo. Njengoko Isamsung yazise isoftware ekhethekileyo, eza phantsi kwegama leSmart Scene Optimizer, ekuvumela ukuba ulungelelanise useto lwekhamera ngokuxhomekeke kwimeko nakwifoto esifuna ukuyithatha.
Kulindelwe ukuba Kukho iinguqulelo ezininzi ezikhoyo zale Galaxy A7 2018. Kuxhomekeke kwintengiso, kuya kusetyenziswa iprosesa eyahlukileyo, ekulindeleke ukuba ibe yi-Exynos kwezinye kunye neQualcomm Snapdragon kwezinye. Ukongeza, ifowuni yayiza kuba nohlobo lwe-NFC, kodwa kubonakala ngathi ayizukumiliselwa kuwo onke amazwe. Asinayo idatha eninzi kakhulu ngoku malunga noku.
Asinalo ulwazi malunga noku okwangoku. Isamsung iyityhile ngokusemthethweni le fowuni, kodwa akukho kwaziwa malunga nokufumaneka kwayo. Inye kuphela inkampani yaseKorea eyithethileyo yile Le Galaxy A7 2018 iya kufikelela kwiimarike zaseYurophu naseAsia. Kodwa ayichazwanga ukuba ngawaphi amazwe aya kuba nakho ukufumana ifowuni.
Akukho nto ithethiweyo ngexabiso nokuba ukuba olu luhlu oluphakathi luza kuba nalo. Ngokusengqiqweni, iya kuxhomekeka kuhlobo oluthengiswayo, kuba kulindeleke ukuba kubekho iinguqulelo ezininzi zefowuni. Siyathemba ukuba olu lwazi luya kukhutshwa kungekudala. Siya kuzimamela ngakumbi iindaba malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Galaxy A7 2018: I-Samsung yokuqala eneekhamera ezintathu zangasemva